प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड बिच मन्त्रि फेर्ने भित्रि कसरत सुरु, को को छन रेड लिस्टमा ? – www.agnijwala.com
प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड बिच मन्त्रि फेर्ने भित्रि कसरत सुरु, को को छन रेड लिस्टमा ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड बिच मन्त्रि फेर्ने भित्रि कसरत सुरु भएको छ ।
वर्तमान सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला आलोचित मन्त्रीहरुलाई परिवर्तन गरी नयाँ तरंग दिन दुवै अध्यक्ष सहमत छन् । उच्च- श्रोतका अनुसार मन्त्रि फेर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष प्रचण्डले एक महिनाअघि नै राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली अनिच्छुक देखिएपछि प्रस्ताव छलफलमा आउन सकेको थिएन ।
प्रचण्डले १ महिना अघि नै सरकारलाई गति दिन र गेर बदल्न मन्त्रि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । प्रचण्डले मन्त्रि फेर्ने प्रस्ताव राखेलगतै प्रधानमन्त्रीले सिंहदरवारमा मन्त्रिको कार्यसम्पादन मूल्याङकन नीति लिएका थिए ।
सचिवमार्फत मन्त्रिको कार्यदक्षतालाई मुल्याङकन गर्ने नीति लिएकै बेला मन्त्रिपरिषद फेरबदल हुने आशंका गरिएको थियो ।
केही मन्त्रिहरु विवादीत र कामलाई गति दिन नसक्ने भएपछि दुई अध्यक्ष मन्त्रि फेर्ने कसरतमा जुटेको स्रोतले बताएको छ । शनिवारको सचिवालय बैठकमा औपचारिक प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिएको थियो । दुई अध्यक्षले मन्त्रि फेर्ने प्रस्ताव ल्याउन लागेका चाल पायका कारण अन्य नेताले बालुवाटारमा बैठक बहिष्कार गरे । मन्त्रि फेर्ने प्रस्ताव आउने निश्चित भएपछि समयमा बैठक नबसेको बहाना बनाएर चार नेता बालुवाटारबाट बाहिरएका थिए ।
फेरिने मन्त्रिमा वनमन्त्रि , अर्थमन्त्रि ,पर्ययटन मन्त्रि र स्थानीयबिकास मन्त्रि रहेका उच्च- श्रोत बाट जानकारी आएको छ।